Moormuu - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:46 26 Adooleessa 20214:46 26 Adooleessa 2021
Ministirri Muummee Tuniiziyaa mormii uummataan aangoorraa kaafaman
Kufaatii mootummaan Covid qolachuurratti agarsiiseen mufachuun hiriira kan ba'an lammiileen Tuniiziyaa poolisii waliin walitti bu'aniiru.
...tti maxxanfame 11:34 13 Adooleessa 202111:34 13 Adooleessa 2021
Hookkara Afriikaan Kibbaatiin yoo xiqqaate namoonni 72 du'an
Erga Pirezidaantiin duraanii hidhamanii booda hookkara Afriikaa Kibbaa keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 72 ta'an du'an.
...tti maxxanfame 5:10 6 Guraandhala 20215:10 6 Guraandhala 2021
Seenaa mormii karaa laagannaa nyaataa fi bu'aa inni buuse
Rogeessi gameessi Indiyaa seera farra-shororkeessummaa haarawa karaa lagannaa nyaataa mormuuf qindeessaa ture osoo mormiin hin eegalin hidhameera. Garuu lagannaa nyaataatiin mormii gaggeessanii maal buufatu?
...tti maxxanfame 12:05 21 Fuulbaana 202012:05 21 Fuulbaana 2020
Poolisoonni maanguddoo waggaa 73 mormiif baate hidhani
Maanguddoo Ninaa Baahinskaayaa mormii dubartoota qofaa magaala guddoo biyyattiitti gaggeefamee irratti hirmaachuun to'annaa jala oolfaman.
...tti maxxanfame 6:29 23 Hagayya 20206:29 23 Hagayya 2020
Nato'n pirezidaantii Beelaarus waraanaan aangoo irraa buusuuf qophii qabaa?
Tibbana Beelaarus keessatti erga filannoon gaggeeffama waliin dhahameera jedhamee fincilli gaggeeffamaa jira. Pirezidaantiin biyyattii ammoo humnoota alaa himatu.
...tti maxxanfame 6:32 28 Adooleessa 20206:32 28 Adooleessa 2020
Haqaafi wabii nan barbaada - Atileet Hayilee G/Sillaase
Fiigichaan maqaa guddaa kan horate atileet Hayilee G/Sillaaseen invastimantii keessattillee bal'inaan hirmaataa jira. Haa ta'u malee, hookkara dhihoo ajjeechaa Hacaaluu booda Oromiyaa keessatti mudateen qabeenyi isaa jalaa manca'eera.
...tti maxxanfame 7:21 11 Adooleessa 20207:21 11 Adooleessa 2020
Erga ajjeechaan weellisaa Hacaaluu Hundeessaa dhagahame booda biyya keessaafi biyya alaatti namuu haqa akka argatu gaafateera. Halluun diimaa garuu maaliif filatame?
...tti maxxanfame 9:30 8 Adooleessa 20209:30 8 Adooleessa 2020
...tti maxxanfame 8:35 4 Adooleessa 20208:35 4 Adooleessa 2020
...tti maxxanfame 11:27 1 Adooleessa 202011:27 1 Adooleessa 2020
Oromiyaatti ajjeechaa Haacaaluun duuba namni 50 ol ajjeefame - MNO
Ajjeechaa Artistii beekamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate hordofee mormii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti mudateen lubbuun namoota darbuun namootni hedduunis madaa'uu himame.